FastNewsNepal | किन आउदैनन भारतिय सेलिब्रेटी नेपाल?
काठमाडौं ८ मङ्सिर। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल नआएको १७ वर्ष भइसकेको थियो मोदी नेपाल आउँदा । त्यसयता उनी पटक-पटक नेपाल आइसकेका छन् । भलै नेपाल-भारत सम्बन्ध कहिले नाकाबन्दी त कहिले सीमा अतिक्रमणले किन नचिसियोस् । भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आइरहन्छन् । भारतीय राष्ट्रपति कार्यकारी नभए पनि पोर्टफोलियोका हिसाबले एक नम्बरको पद हो । त्यहाँका विदेशमन्त्रीको पनि नेपालमा बाक्लै भ्रमण हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्तरमा भारतीय उच्च राजनीतिज्ञहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लै हुने गरे पनि बलिउडका उच्च सेलिब्रिटीहरू नेपाल विरलै मात्रै आउने गरेका छन् । आफ्नै व्यक्तिगत काम विशेषले बलिउड सेलिब्रिटीहरू यदाकदा नेपाल आए पनि उनीहरू आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गर्न भने हम्मेसी आउँदैनन् । आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खानजस्ता अभिनेता तथा उनीहरूसँगै पर्दामा देखिने समकालीन अभिनेत्रीहरू नेपालमा खासै आएको पाइँदैन । कुनै संस्थाको ब्रान्ड एम्बेस्डरका रुपमा वा चलचित्रको छायांकनका लागि नेपाल आउनेबाहेक हिन्दी चलचित्रका पहिलो रोजाइका अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरू नेपाल आउँदैनन् ।जबकि हरेक शुक्रबार हिन्दी चलचित्र भारतसँगै नेपालमा पनि प्रदर्शन हुन्छन् । नेपालमा नेपालीभन्दा पनि भारतीय चलचित्रको प्रतीक्षा बढी हुन्छ । युवा पुस्ताको रोजाइमा नेपालीभन्दा हिन्दी चलचित्र नै पहिलो रोजाइमा पर्छ । त्यसोभए किन बलिउडका ठूला स्टारको रोजाइमा नेपाल पर्दैन ? अथवा बलिउडका ठूला सेलिब्रिटी किन नेपाल आएर स्टेज कार्यक्रममा देखिँदैनन् ?